शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान हुँदै – Vision Khabar
शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान हुँदै
। २१ मंसिर २०७४, बिहीबार १३:२३ मा प्रकाशित
बाँके, २१ कोहलपुर । बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान प्रक्रिया चलिरहेको छ । मतदान गर्न विहान देखि नै स्थानिय जनता मतदान स्थलनमा लाईन लागिरहेका छन् । स्थानियत तह भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा कमै मात्रामा स्थानिय जनताहरु मतदानमा सहयोगता जनाएको पाईएको छ ।
बाँके जिल्लामा ३२७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । बाँके जिल्लामा कूल मतदाता संख्या दुई लाख ७६ हजार ७१८ रहेको छ । बाँके क्षेत्र नं १ मा ९८ हजार ३२० मतदाता रहेका छन् भने बाँके क्षेत्र नं. १ मा हाल सम्म २१ हजार ३ सय ५५ मत खसेको छ ।
साथै बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पुरुष भन्दा पनि महिला मतदाताको संख्या बढि देखिएको छ । विभिन्न कामको शिलशिलामा घर भन्दा बाहिर रहेका पुरुषहरु यस पटकको निर्वाचनमा कमै मात्रामा भोट हाल्न आएका छन् । स्थानिय तहका यस पटकको मतदान प्रक्रिया बझुन् गा्रहो भएको बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १ की मुना थापाले बताईन् ।
स्थानिय तहको निर्वाचनका सबैले घरमै आएर सिकाएका थिए र तर यस पटकको निर्वाचनमा कसैले पनि मतदान प्रक्रिया नसिएकाले मतदान गर्न केहि अप्ठ्यारो भएको उनीले बताईन् ।
निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण तरिकाले चलिरहेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ८ का पूर्ण प्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसारका जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरु छनौट गर्ने समय भएकाले स्थानिय जनताहरु बिहानै देखि भोट हाल्न आएका छन् ।